Home Wararka Khilaafka Baarlamaanka Galmudug oo cirka isku shareeray
Khilaafka Baarlamaanka Galmudug oo cirka isku shareeray
Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Galmudug Cabdullaahi Xirsi Maxamed ayaa ka horyimid Go’aan isaga iyo Xildhibaano kale uu Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas Maxamed Nuur Gacal uga joojiyay afar fadhi oo kamid ah fadhiyada Baarlamaanka.
Guddoomiye Cabdullaahi Xirsi ayaa Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Gacal ku eedeeyay inuu ku xadgudbay sharciga iyo xeer-hoosaadka Maamulka, isla markaana uu ku been abuurtay Dastuurka u yaalla dowlad Goboleedka Galmudug.
Cabdullaahi Xirsi Maxamed ayaa oo Qoraal soo saaray ayaa waxaa uu ku sheegay in Guddoomiye Maxamed Gacal isticmaalay awood dheeraad ah oo uusan siineynin xeer-hoosaadka Baarlamaanka, uuna soo saaray Warqad uu ku carqaladeynayo habsami u socdka shaqada Baarlamaanka.
Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Galmudug ayaa Xildhibaanada ugu baaqay in ay u midoobaan sidii ay uga hortagi lahaayeen Guddoomiye Gacal oo soo saarey Go’aan afar fadhi iyo Gunno laba bil looga joojiyay Xildhibaano ka tirsan Galmudug oo uu ku jiro Guddoomiye Cabdullaahi Xirsi Maxamed.
Xubnaha uu shaqo joojinta ku sameeyay Gacal ayaa maalmahaan aad u diidanaa shuruuc aan marin habraaca saxda ah oo Baarlamaanka xoog lagu marsiiyay iyo qaladaad kale oo lagu eedeeyay inuu ku kacay Guddoomiye Dr. Maxamed Nuur Gacal.
Previous articleMagalaada Baladweyne oo ay ka jirto cabsi dagaal
Next articleBeesha caalamka oo war kasoo saartay hadalkii ka soo baxay Wasiirka Amniga
Beesha Caalamka oo Qeyb weyn ka ah Qaska siyaasdeed ee Somaliya...
Beelaha Hawiye oo Shir Deg-Deg ah ka yeelanaya Muda Kordhinta Farmaajo